Federasiona Equestriane Espaniola: Fiandohana sy hetsika | Soavaly Noti
Jenny monge | | fitsipika
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny Royal Spanish Equestrian Federation isika, ny niandohany sy ny fifehezana ary ny hetsika fitondra-piara izay iasan'izy ireo.
Fa andao aloha hiresaka kely momba ny tontolon'ny soavaly, araka ny fantatra Ny soavaly dia nitana andraikitra lehibe teo amin'ny zanak'olombelona na dia niovaova aza ny asany nandritra ny taona maro. Vonona ny hahita bebe kokoa?
1 Ny tantaran'ny soavaly mitaingina soavaly
1.1 Ireo mpialoha lalana sy fanombohana mitaingina soavaly ho fanatanjahantena
2 Famoronana ny Royal Spanish Equestrian Federation
3 Hetsika na fitsipi-pifehezana notanterahina
3.2 Miasa mitaingina soavaly
3.3 Akanjo fitafiana
3.4 Fifaninanana feno
3.5 Akanjo Cowgirl
3.9 Hitsambikina misakana
3.11 baolina soavaly
4 Federasiona mahaleo tena
Ny tantaran'ny soavaly mitaingina soavaly
Ny hafainganam-pandehan'ny trondro dia nahatonga azy ireo ho lasibatry ny olona prehistorika mpifindrafindra monina, ary tsy maintsy nanao otrika hisambotra azy ireo izy ireo ary hihinana ny nofony.
Tatỳ aoriana, rehefa mipetraka ny zanak'olombelona ary manomboka miasa ny tany sy ny biby fiompy, tsapany fa mety ho fitaovana miasa tena ilaina ilay soavaly. Ka io biby io dia nanjary zava-dehibe ho an'ny zanak'olombelona.
Soavaly Nampiasaina tamin'ny asa fiompiana sy fambolena izy ireo, fa koa hanao ady. Ny iray amin'ireo soavaly malaza indrindra ao amin'ny tafika mpitaingin-tsoavaly dia i Bucephalus, nataon'i Alexander the Great. Ho an'ity asa soavaly ady ity dia noforonina ny stapes Tena nilaina izany.
Ireo mpialoha lalana sy fanombohana mitaingina soavaly ho fanatanjahantena
Tamin'ny vanim-potoana antenantenany dia nahazo laza lehibe ireo Knight izay nampiofanina tao amin'ny School of Knights na Spanish Chivalry. Rehefa ela Nihanaka be ny lalao mitaingina soavaly sy ny fifaninanana, nipoitra ny fanatanjahan-tena. Ny fialamboly amin'ireo fifaninanana ireo dia mitohy izay natao araka ny hita eo amin'ny sary.
La Ny sekoly nitaingina voalohany dia nipoitra tany Italia tamin'ny 1539. Nandritra ny taonjato maro, teknika samihafa no nipoitra tamin'ny kanto mitaingina, toy ny fiorenan'ny fiandohana raha mitsambikina ny soavaly (teknika nampidirina tamin'ny 1902).
En 1921 natsangana ny Federasiona Iraisampirenena Mpitaingina Soeda (FHI), mankato ny lalàna mifehy ny fifaninanana iraisam-pirenena, ny lalao olympika ary ny fifehezana soavaly hafa. Ny FHI dia noforonin'ny solontenan'ny federasiona nasionaly valo: Belzika, Danemark, Frantsa, Italia, Japon, Norvezy, Suède ary Etazonia. Misy federasiona mpikambana miisa 134 amin'izao fotoana izao ho an'ny FHI.
Famoronana ny Royal Spanish Equestrian Federation
22 Jona 1901 natsangana ny Madrid Equestrian Society notarihin'ny Duke of Uceda. Ity hetsika ity dia nanamarika ny fiandohan'ny izay ho lasa Federasiona Mpanjanahan-tany Espaniola Royal. Ny toerana voafidy hananganana klioba dia amin'ny tanin'ny tendrombohitra El Pardo, amin'ny 64 hektara ny fanitarana.
Tamin'ny Janoary 1908 araka ny fangatahan'ny klioba, Mpanjaka Alfonso XIII dia nanome azy ny anarana Royal, miantso ny tenany avy eo "Royal Spanish Equestrian Society of Madrid".
Tamin'ny fiandohan'ny 1936, ny klioban'ny firenena dia niorina ary niasa tena tsara, na dia izany aza Ny ady an-trano dia nisy fiantraikany tamin'ny fampandrosoana ny fiainan'ny klioba ary koa ny fampitaovana azy. Efatra taona no nanamboarana ireo fotodrafitrasa. Voadona sy nihena ny tany satria ny sasany tamin'izy ireo dia nanjary anisan'ny minisiteran'ny Fambolena. Marina fa na izany aza, ny Minisitera dia niara-nitantana tamin'ny filankevitry ny tanànan'i Madrid ny tany tany akaikin'i La Zarzuela.
Natomboka indray ny hetsika ary natambatra tamin'ny lalàna vaovao ny Royal Spanish Equestrian Society sy ny Country Club, miantso ny tenany nanomboka tamin'io fotoana io tao amin'ny Royal Spanish Equestrian Federation. Nanomboka tamin'io fotoana io, tamin'ny 1942, no nitrangan'izany nampiroborobo ny fanarenana ireo fotodrafitrasa an'ny Royal Spanish Equestrian Federation, manomboka fotoana famirapiratana izany dia haharitra hatramin'ny taona 70.
Tamin'ny 1983, maty ny zon'ireo tany azony teny amin'ny lalambe Castilla, nanomboka nitady tany vaovao izy ireo. Amin'ny 1990 novidiana toeram-pambolena iray tany San Sebastián de los Reyes ary nanomboka ny asa amin'ireo tany ireo mba hahitana ireo fotodrafitrasa vaovao.
Ny klioba dia manohy ny fivoarany amin'ireo fotodrafitrasa ireo hatramin'ny nanokafana azy tamin'ny 1997.
Hetsika na fitsipi-pifehezana notanterahina
Fifehezana misy hizaha toetra ny hafainganana, ny fahaizana ary ny fanoherana ny soavaly sy ny mpitaingina azy. Samy tsy maintsy mandeha lavitra amin'ny toerana samihafa izy ireo, ao anatin'ny iray andro. Ny mpitaingin-tsoavaly dia tsy maintsy mahafantatra ny fomba fatra ny ezaka vita amin'ny soavaliny. Rehefa tapitra ny hazakazaka dia refesina ny famonoana ny biby ary raha mihoatra ny avela izy ireo dia esorina amin'ny fitsapana ilay mpitaingina azy.
Miasa mitaingina soavaly
Mihoatra ny fifehezana, ny fizotran'ny asan'ny soavaly sy ny mpitaingina azy, ny fiofanana miaraka amin'ny tanjona hanatsara ny fahaiza-manao izay ananan'ny biby sy ny fananana fahaiza-manao vaovao hiasa amin'ny omby any an-tsaha. Misy ny fifaninanam-pirenena amin'ny hazakaza-tsoavaly asa izay misy ny fampandrosoana ny fitsapana efatra, na isam-batan'olona na ekipa: Akanjo, fahaizanana, Haingam-pandeha ary lavitra ny omby.
Ity dia iray amin'ireo taranja olympika. izany mifototra amin'ny firindrana eo amin'ny soavaly sy ny mpitaingina azy, manao fihetsiketsehana samy hafa misy fahasahiranana lehibe napetraka tamina programa. Mihetsika any aoriana ireo soavaly, mamadika ny tenany, manatanteraka Passage na Piaffe, amin'ny lalana 20m x 60m, eo ambany fijerin'ny mpitsara. Na dia voajanahary ho an'ny biby aza ny hetsika sasany dia mitaky fampiofanana sy fanomanana be dia be izy ireo.
Akanjo fifehezana olympika
Ny fifaninanana feno dia fifehezana izay sokajy ny fifehezana ny fitafiana, asehoy ny fitsambikinana amin'ny lalana sy ny hazo fijaliana.
Ity fitsipi-pifehezana ity dia tanterahina mandritra ny telo andro miaraka amin'ilay soavaly iray ihany, ny voalohany dia manomboka amin'ny fitafiana, ny faharoa fitsapana lavitra ary ny fitsapana fitsambikinana farany teo amin'ny lalana.
Akanjo Cowgirl dia misy andian-dahatsoratra fanazaran-tena nalaina avy amin'ireo izay natao tamin'ny asa miaraka amin'ny omby. Ireo fanazaran-tena ireo dia tanterahina ao anatin'ny quadrilateral.
Ity fitsipi-pifehezana ity dia avy amin'ny fifaninanana mitaingina tanteraka, ankoatr'izany amin'ity tranga ity dia ampiasaina kalesy notarihin-tsoavaly na soavaly soavaly.
Misy sokajy telo: hazo voasarimakirana (soavaly iray), vatan-kazo (soavaly roa) ary soavaly fahefatra (efatra). Ny fifaninanana henjana dia noforonina, araka ny hitantsika tamin'ny fifaninanana mitaingina feno, an'ny fitsapana telo: Akanjo amin'ny peratra 40m x 100m izay anaovana famerenana iray, tsarain'ny mpitsara izay manome lanja ny fahalalahana, ny fahamendrehana, ny mahitsy, ny fifandraisana, ny fiara, ny fivoriana ary ny fandefasana. Ny fitsapana faharoa dia a Killer, fitsapana ny fanoherana amin'ny alàlan'ny Mazava ho azy fa misy sakana voajanahary sy artifisialy, izay anambarana ny mpandresy ilay mametraka ny fotoana mety indrindra. Ny fitsapana farany dia ny fitantanana, izay misy ny sakana tsotra samy hafa, toy ny «cone» na baolina) na maromaro. Amin'ity tranga ity dia tsara ny tsy handondona ireo sakana voalaza ireo sy ny fotoana hajanon'ny mpifaninana tsirairay.
Ny hetsika miaraka amin'ireo môtô dia nitombo tao Espana nandritra ny taona vitsivitsy, midika izany fa ny kely dia afaka mametraka biby amin'ny habe mety kokoa. Ny hetsika atao miaraka amin'ireo soavaly Manomboka amin'ny mitaingina fototra mankany amin'ny fitsambikinana avo na fifaninanana feno.
Ity taranja ity dia fanatanjahantena mpitaingin-tsoavaly, ao anatin'ny taranja Monta Andrefana, izay tsy maintsy anaovan'ny mpitaingin-tsoavaly seho maromaro hanehoana ny fahaizan'ny biby.Ny mpitaingina dia tsy maintsy mandinika manokana ny hafainganam-pandeha, fepetra takiana isaky ny mihetsika, izay voafaritry ny lamina iray. Amin'ireo fitsapana ireo, ny soavaly dia tsy maintsy mitandrina foana ary vonona ny hanome toromarika momba ny mpitaingina azy. Ny fihetsika, ny malama, ny fahamendrehana, ny hafainganam-pandeha, ny fahefana ary ny hafainganan'ny soavaly dia omena lanja.
Miezaka mitaingin-tsoavaly ity fifehezana ity làlana misakana vita amin'ny bar. Mba hampiharana tsara an'ity fifehezana ity dia tsy maintsy ampandalovina ny vato misakana rehetra nefa tsy mandondona ireo bara rehetra.
Ny làlana misakana ny sakana dia iadiana amin'ny mizana isan-karazany: fitsapana fotoana, fihazana, herinaratra na famantaranandro ohatra. Izy ireo koa dia sokajina ho vondrona samihafa arakaraka ny hahavony, eo anelanelan'ny 1,10 sy 1,60.
Amin'ity fitsipi-pifehezana ity, ny fahaizan'ny mpitaingin-tsoavaly mahavita fitsangatsanganana mpitaingin-tsoavaly manerana ny tontolo ambanivohitra.
Ny baolina soavaly dia a lalao izay ekipa roa, misy mpikambana enina nitaingin-tsoavaly avy, no mifanatrika. Mitondra baolina misy tahony hoditra enina izy ireo, dia tsy maintsy mahazo isa betsaka indrindra amin'ny haron'ny ekipa mpanohitra. Izany dia tsy maintsy atao amin'ny fidiran'ny mpikambana telo farafaharatsiny ao amin'ny ekipa mpanafika isaky ny lalao, manangona ny baolina nefa tsy midina amin'ny soavaly.
Izany no Akanjo nifanaraka dia fifehezana paralimpika hatramin'ny 1996. Ny fitsipika ankapobeny dia mitovy amin'ny akanjo. Ireo mpitaingin-tsoavaly, mba hanombanana ny fiantraikan'ny fahasembanan'ny tsirairay, manaraka ny fitsipiky ny fahasamihafana, dia tsy maintsy manatanteraka ilay antsoina hoe "Fanasokajiana ho an'ny fahasembanana amin'ny fanatanjahantena". Natao izany mba ho ara-drariny araka izay azo atao ny fifaninanana.
Fifehezana izay azo faritana hoe gymnastika mitaingina soavaly mandeha. Ny soavaly dia tarihin'ny mpamily. Fanatanjahantena sy zavakanto tena mifaninana izy io ary iray amin'ireo eken'ny International Federaly Equestrian.
Ho fanampin'izany, amin'ireo fitsipi-pifehezana rehetra ireo, ny Federasiona Equestrian Espaniola dia manao fizahan-tany fizahan-tany ihany koa.
Federasiona mahaleo tena
Misy federasiona isam-paritra isan-karazany toy ny: The Andalusian Horse Riding Federation na ny Aragonese Horse Racing Federation. Ka raha te hanitatra ny fampahalalana momba ny faritra misy anao ianao dia mamporisika anao hiresaka amin'ny tranonkala manokana an'ny federasionan'ny fizakantenanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » fitsipika » Federasiona Equestrian Espaniola: Fiandohana sy hetsika atao
Toeram-piompiana miaramila sy ny foibeny any Espana